रोचक प्रसङ्ग – Social Touch Khabar
काठमाडौँ । रक्सी पिउने मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । रक्सीमा हुने अक्टानल नामक रसायनका कारण रक्सी पिएको मानिसलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने अध्ययनले देखाएको हो । सामान्तया मानिसले सास फेर्दा निस्कने कार्बनडाई अक्साईडका…
कोरोना महामारीका कारण मानिस बेरोजगार, बिरालोले पायो जागिर !
काठमाडौं । विश्वमा धेरै मानिस कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनिरहँदा अष्ट्रेलियामा भने एउटा बिरालोलाई सेक्युरिटी गार्डको जागिर दिइएको छ । त्यो पनि अस्पतालको । त्यसो त जनावरहरु काममा निकै वफादार हुन्छन् । उनीहरुलाई सिकाउने विभिन्न…
विचित्रको गाँउः बेडरूम, किचन र बाथरुममा विशालु सर्प भेटिन्छ
काठमाडौँ । भारतको नागचुन गाउँमा बाटो, खेत वा घर आसपासमा मात्र होइन घरभित्र बेडरूम, किचन र दराजमा समेत विशालु सर्प भेटिन्छ । नागचुनको हवाईपट्टिको सामुन्नेमा रहेको सयौं एकड जग्गामा विशालु सर्प भेटिन्छ । यस गाउँमा…
चराको यस्तो अनौठो अभिनय !
काठमाडौँ । के तपाईले कुनै जनावरले अभिनय गरेको देख्नु भएको छ ? भारतमा एक जीवले गरेको हर्कत देखेर तपाई अचम्मित हुनुहुनेछ । भारतमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ । जसमा एक पक्षीले गरेको हर्कत…
‘रगत’ जस्तै पसिना निकाल्ने प्राणी हिप्पोपोटामस
काठमाडौँ । झट्ट हेर्दा सुँगुर जस्तो देखिने तर निक्कै ठूलो शरीर हुने हिप्पोपोटामस धेरै समय पानीमा नै बस्ने गर्छ । खास गरेर यो अफ्रिकामा पाइने जनावर हो । लाखौं वर्षअघि चाहिँ यो यूरोप, एशिया र…
तान्जानियाका एक सामान्य व्यक्ति बने रातारात करोडपति !
काठमाडौँ । तान्जानियाका एक सामान्य नागरिक रातारात करोडपति बनेका छन्। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो तान्जानाइट नामक बहुमूल्य रत्न फेला पारेका उनी करोडपति बनेका हुन् । कुल १५ किलो तौल भएका दुईवटा पत्थर फेला पारेका सानिनिउ लाइजरले…
पेट्रोल नपाएको झोकमा सर्पको प्रहार !
काठमाडौँ । भारतको महाराष्ट्र प्रदेशको बुलढाणाको एक पेट्रोल पम्पमा बोतलमा पेट्रोल लिन आएका दुइ युवकले पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठामा सर्प छाडेर भागेका छन् । सर्पलाई कोठामा देखनासाथ पेट्रोलपम्प भागदौड मच्चिएको थियो । पछि स्थानिय…